Ndị na-emepụta ihe na ndị na-ebubata ihe - China Tactical Factory
Akpụkpọ anụ ụfụfụ mmiri anaghị egbochi mmiri egbe 38.5inch ogologo
Akpa égbè agha, 38.5 inch ogologo, na inogide 600D oxford ọchịchịrị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ákwà, mgbochi ịkpụ, inogide, n'ime na 8cm ọkpụrụkpụ akwa ụfụfụ na ezigbo njupụta na àgwà iji chebe egbe na adaba-ebu eriri na-adaba adaba edozi ubu eriri na azụ.
Ihe No.LST 2001
Nha:38.5L * 10W * 3.5H inch
Akpa egbe mmiri na-egbochi ndị agha Tactical 38.5inch ogologo
Akpa égbè agha Tactical, 38.5 inch ogologo, 600D oxford gbara ọchịchịrị ákwà, mgbochi esemokwu na mgbochi ịkpụ, n'ime ya na 1.8cm ọkpụrụkpụ ogbo n'ụdị dị mma na mma iji chebe egbe na adaba arrying eriri.
Ihe No.LST 2002
Nha:38.5L * 12W inch
Agba:Green gbara ọchịchịrị, ma ọ bụ dị ka ahaziri.
Tactical Military Waterproof HK G36 égbè akpa 36.5inch ogologo onu mma
Tactical Military HK G36 akpa égbè, 36.5 inch ogologo, na inogide 600D oxford ojii ákwà, n'ime na 1.8cm ọkpụrụkpụ EPE na mma udi na mma iji chebe egbe na adaba na-ebu eriri na gbanwee slanted ubu straps na buckles, égbè bid akpa àgwà.
Ihe No.LST 2003
Ihe:600D Oxford PVC kpuchie ya na njupụta karịa na yarn ọkọlọtọ.
Agba:Black, ma ọ bụ dị ka ahaziri.
Agha Tactical Waterproof Bag 38.5 inch ogologo
Akpa Tactical egbe akpa, 38.5 inch ogologo, na inogide 600D oxford ákwà, n'ime na 1.5cm ọkpụrụkpụ sponge na ezigbo udi na àgwà iji chebe egbe na adaba-ebu eriri na ubu eriri.
Ihe No.LST 2004
Nha:38.5L * 10W * 3H inch
Akpa mgbochi mmiri na-egbochi mmiri ugboro abụọ akpa 43.5 inch ogologo
Akpa egbe egbe abụọ nke Tactical, ogologo 43.5 inch, nwere akwa 600D oxford na-adịgide adịgide na njupụta ọzọ, yana yarn ọkọlọtọ, n'ime ya nwere 1.8cm ọkpụrụkpụ EPE n'ụdị dị mma na ịdị mma iji chebe egbe, ibu eriri na-adaba adaba na eriri ubu dị mma na azụ.
Ihe No.LST 2005
Nha:43.5L * 14W * 4H inch
Ihe:600D Oxford PVC kpuchie na njupụta karịa na yarn ọkọlọtọ.
Akpa egbe nwere atụmatụ aghụghọ ogologo 38 inch
Akpa egbe egbe, ogologo 38.5 inch, nwere nnukwu ọrụ ụlọ ọrụ 600D oxford, n'ime ya na 1.8cm thicknes EPE, nwere akwa akwa akwa akwa akwa na akwa ubu gbasiri ike n'ubu.
Ihe No.LST 2006
Agba:Coyote, ma ọ bụ dị ka ahaziri.
Tactical Military Sniper Drag Bag 53 inch ogologo
Akpa na-adọkpụ Sniper, ogologo 53 inch, nwere nnukwu ọrụ ụlọ ọrụ 600D oxford, n'ime ya nwere 1.8cm ọkpụrụkpụ EPE dị mma na ịdị mma, teepu akpara nke ọma na-ebu eriri na ezigbo eriri ubu gbasiri ike na azụ.
Ihe No.LST 2007
Nha:53L * 12W * 3.5 inch
Akpa agha Sniper égbè akpa 38 inch ogologo
Akpa egbe egbe Sniper, ogologo 38 inch, nwere nnukwu ọrụ ụlọ ọrụ na-adịgide adịgide 600D oxford, mkpuchi PVC ugboro abụọ, n'ime ya na EPE ọkpụrụkpụ 1.8cm dị mma na ịdị mma, w.kpara mma webbing na-ebu eriri na ubu eriri na azụ.
Ihe Nkeji:LST 2008
Ihe:600D Oxford mkpuchi PVC ugboro abụọ
Agba:OD, Tan, BK, GY, CAMO, 5 agba oge gboo ma ọ bụ dị ka ahaziri.
Mgbochi agha nwere egbe okpukpu abụọ ogologo inch 38
Usoro ịgba egbe okpukpu abụọ, ogologo 38 inch, nwere nnukwu ọrụ nrụpụta ọrụ 600D oxford, mkpuchi PVC ugboro abụọ, n'ime ya nwere ọkpụrụkpụ 1.8cm EPE dị mma na ịdị mma, w.kpara mma webbing na-ebu eriri, ubu eriri na azụ na ọtụtụ molle usoro maka nghọta na
Ihe Nkeji:LST 2009
Usoro agha siri ike nke ogologo inch 36 nke nwere ụfụfụ akwa 8cm
Mkpebi siri ike nke ogologo ogologo 36 inch, ihe ABS - ọkpụrụkpụ 2.8-3.3mm, mgbochi mmanu na unyi na-adịgide adịgide, dị mma iji eriri roba na-ebu ya, yana eriri ubu nwere ike ịpụpụ, ihe omume enyi.
Ihe Nkeji:LST 2010
Agba:Black, kọfị, ọcha ma ọ bụ dị ka ahaziri.